/ब्लग/fluoxymesterone , tamoxifen-citrate/रिकभरीका लागि पीटीसी औषधि-नोल्वाडेक्स, क्लोमेड, लेजोजोलोल, एरोसासिन, हेलोस्टिन
प्रकाशित 11 / 05 / 2017 by Dr. Patrick Young मा लेखियो fluoxymesterone, tamoxifen-citrate.
बडिबिल्डिंग क्षेत्रमा, शरीर निर्माणको लागि उपयुक्त स्टेरियोड्स कसरी छनौट गर्ने प्रश्न सोध्नुको लागी एक प्रश्न हो, मास्कलट ट्याकमा अर्को पनि छ, यो कसरी चक्र चक्र (PCT) क्लोमेड, नोल्वाडक्स र लेजोजोलले, एरोसासिन, हेलोस्टिन, अन्स्ट्रोजोल सही तरिकाले। आज हामी तपाईंलाई सिकाउन चाहन्छौं कि कसरी उपयुक्त पीटीसी ड्रगहरू छनौट गर्ने।
के छ PCT ड्रग्स?
चक्र थेरेपी (पीसीटी) को लागी विभिन्न तंत्रबाट काम गर्ने औषधिहरू प्रयोग गर्ने विधि हो (पीसीटी) एक किसिमको काम हो, यो प्रक्रिया हो जसले एस्ट्रोजनको नियन्त्रण स्तर हार्मोनल स्तरमा नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउन विशेष कम्पोज्स, पोषण र प्रायः दबाइ औषधिहरू। सामान्यतया प्रोहोर्मोनोन / स्टेरियोड्सको चक्र पछि। मास्टिन एनाबिक स्टेरियोड्स, विशेष गरी अन्डरन्स, शरीरको आफ्नै टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शनको अवरोध हुन्छ। जब एक बिल्डर बिल्डर स्टेरॉयड चक्र बाट आउँछ, प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन शून्य छ र रगतमा लिइएको स्टेरियोड्सको स्तर कम हुँदैछ। यो कोटाटिकल को अनुपात छोड्छ: रक्त उच्च मा anabolic हार्मोन, यसैले शरीर catabolism को स्थिति मा छ, र, को रूप मा, चक्र मा प्राप्त भएको धेरै मांसपेशियों ऊतक अब गुम हो। यसैले, पीसीटी आवश्यकता हुन्छ जब शरीर निर्माणयहाँ6पीटीटी ड्रगहरू छन्, हामी तिनीहरूलाई परिचय गर्दैछौँ र पीसीटीमा उनीहरूको फरक प्रकार्य हुन्छौं।
PCT ड्रग्स Nolvadex
Nolvadex, टामोक्सिफिन किट्रेटको रूपमा पनि जानिन्छ, नोल्डडेक्सको मुख्य चिकित्सा प्रयोग पहिले देखिने र रेजिनोपसल महिलाहरु को शुरुवात र पछि दुवै मासु र क्यान्सरको क्यान्सर उपचार गर्दछ। शरीरको निर्माणको लागि पीटीसी ड्रगको रूपमा प्रयोग गरिन्छ,
Nolvadex लाई LH र कुल टेस्टोस्टेरोन बढाउन मद्दत गर्नको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रयोग गरिन्छ। यसले तपाईंलाई एक चक्रबाट पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ, जुन यसलाई चक्र चक्र थेरेपी (PCT) को लागि लोकप्रिय छनोट गर्दछ। एक क्लोमेफिन, tamoxifen संयोजन धेरै पीसीसी रेजिमेसनहरूको लागि उत्तम रिकभरी विकल्पहरू मध्ये एक हो। जब प्रयोगकर्ताले एनाबोलिक स्टेरियोड्स चलाउँछ, पिट्यूटरीले यसलाई धेरै हार्मोन प्राप्त गर्दछ, त्यसैले यो अस्थिर हुन्छ। र शरीरले अब यसको टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्दैन; साधारण शब्दहरूमा, तपाईंको प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन घटाउँछ।
यो नोक्सवाडेक्स कसरी चलाउँछ? यसले हाइपोफिसिसलाई अझ बढावा गर्नका लागि काम गर्दछ जुन यो ग्रोनडोट्रोपिनलाई रिहाउन को लागी काम गर्दछ। यो एस्ट्रोजनले पिट्यूटरीमा जानबाट काम गर्दछ, जुन यसलाई एलएच उत्पादन गर्न को लागी हेरफेर गर्दछ। त्यसो भए सबै टेस्टोस्टेरोन स्तरको एक चिकनी पोस्ट चक्र थेरेपी (पीसीटी) । नतिजाको रूपमा, नोल्भ्याडेक्स फाइदाहरूले तपाईंको शरीरलाई पुनःप्राप्त गर्न सक्षम नभएसम्म मांसपेशी लाभहरूमा कुनैपनि हानिलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
PCT ड्रग्स Clomid
क्लोमेड, पनि क्लोमेफीन सिटरेट भनिन्छ, एक SERM (चयनिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर), tamoxifen (nolvadex) जस्तै छ। यो ओभर्युलेशन इन्चिंगको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन बाख्रा भएकाहरूका लागि उपयोगी छ।
Nolvadex जस्तै, क्लियोड woks hypophysis लाई उत्प्रेरित गरेर अधिक गोनडोट्रोपिन जारी गर्न। Gonadotropins प्रोटीन हार्मोनहरु जुन पिट्यूट ग्रंथि को गोंडाटोप्रो कोशिकाओं द्वारा गुप्त गरिन्छ र follicle उत्तेजित हार्मोन (FSH) को तेज र अधिक रिहाई को उत्तेजित गर्दछ र luteinizing हार्मोन (एलएच)। जब गोनडोट्रोपिनहरूमा वृद्धि हुन्छ, एलएच मा वृद्धि कुल टेस्टोस्टेरोन ले स्तरलाई प्रयोगकर्तालाई कृत्रिम रूपले उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तरको बनाए राख्न अनुमति दिन्छ जबसम्म उनीहरूको आफ्नै शरीर पुनः प्राप्त गर्न सक्षम नहुन सक्छ, यसैले लाभहरू कायम राख्छ। यही कारण हो कि क्लोमेड पोस्ट चक्र थेरेपीमा लोकप्रिय छ। (पीसीटी) को चक्र एनाबिक स्टेरियोड्स को बीच।
PCT ड्रग्स Letrozole
लेजरोल, ब्रान्ड नाम, Femara.This औषधि रक्सीको क्यान्सर (जस्तै हार्मोन-रिसेप्टर-सकारात्मक स्तन क्यान्सर) महिलाहरु रजोनिवृत्ति पछि उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। साथै, पीटीसी ड्रगको लागि प्रयोग गरिन्छ, लेजोजोलोल ड्रगले शरीर बनाउँछ एस्ट्रोजेनको मात्रा घटाउँछ र नारीकरणको प्रतिक्रिया कम गर्न मद्दत गर्दछ।
लेजोजोल (तेस्रो पीढी) एक स्टेरॉयडल छनौट हुने तेस्रो पीडा अरोमाटेस अवरोधक हो जुन अरिमेदक्स जस्तै हुनेछ र ईरेजनिक प्रभावहरू दिँदैन। यसको अर्डिमैक्सक्स को समान धेरै छ किनकी उनि दुवै Type2 गैर-स्टेरडियल प्रतिस्पर्धी aromatase अवरोधक भनिन्छ। महिलाले महिलालाई यौन सम्बन्धमा यौन सम्बन्ध राख्ने गर्दछन्। यौन सम्बन्धमा यौन सम्बन्धमा यौनसम्बन्धी यौनसम्बन्धी यौन सम्बन्धमा यौनसम्बन्ध राख्ने गरिन्छ। हातमा, gyno देखि छुटकारा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। पीसीटीको समयमा यसको एक लिपिको र लिपिडको हानिकारकको रूपमा प्रयोग नगर्नु, केवल चक्रको दौडान मात्र र यसको अत्यधिक एस्ट्रोजेननिक पछि यसको सावधान रहनुहोस्।
PCT ड्रग्स Aromasin
Aromasin, पनि Exemestane भनिन्छ,
यो एक आत्मनिर्धारित Aromatase अवरोधक हो कि अरोटोजज एंजाइम रोक्न एस्ट्रोजेन बाट अरोमाटेज अवरोधक भनिन्छ। साथै, यो स्टेरॉयडल एआई हो जसले यसलाई तपाईंको लिपिडलाई अन्य गैर-स्टेरॉयड एअर जस्तै जस्तै असर पार्छ। यो पनि विषाक्त जिगर होइन, र नकारात्मक असर बिना लामो समय सम्म दौड्न सक्दछ जुन निश्चित रूपमा बडिबिल्डरहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प हो।
कसरी सामोसासिनले काम गर्छ? यसले एस्ट्रोजेनलाई पूर्ण रूपमा पूर्ण गर्नेछैन र यसले रिसेप्टरमा बाँधिएको भागलाई निष्क्रिय गर्दछ। नोल्वा मूलतः एस्ट्रोजेनलाई रिसेप्टरमा बाध्यताबाट रोक्न सक्दछ तर। ... त्यो सबै एस्ट्रोजन अझै पनि निर्माण भइरहेछ। त्यसोभए जब तपाईं आउन सक्नुहुन्छ फेरि फेरि बाध्य गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंलाई Gyno पुनर्स्थापना दिनुहोस्। तपाईं चक्र र पटमा सम्पूर्ण अरोमोनिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
PCT ड्रग्स Halotestin
ह्लोओस्टिन, फ्लोओक्सिमेस्टरोन.फ्लूओक्सिमेस्टरोन एक सामान्य एनाबोलिक एन्ड्रोजेनिक स्टेरॉइड हो जुन हाइपोगोनद्याम को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ वा पुरुषहरु को लागी कम टेस्टोस्टेरोन स्तर मा।
यो पुरुष अग्लो ढिलाइको उपचारमा समेत महिला स्तन नेपोलसामको उपचारमा प्रयोग गरिएको छ।
यद्यपि, फ्लोकोक्सिमेस्टोन एक एन्ड्रोजनको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ, हेलोस्टिनको मुख्य प्रकार्य वा कारवाहीको तर्फबाट लक्षित र एण्ड्रोजन रिसेप्टरहरूमा बाँधिएको छ।
यस कारणको लागि, यो एक एन्ड्रोजन रिसेप्टर एग्रोनिस्ट भनिन्छ; यो एक ट्रिगरको रूपमा बढी सोच्नुहोस् जुन उकालोका गतिविधिहरू सुरू गर्दछ।
Androgens पुरुष हार्मोन हुन् जसले पुरुष यौन विशेषताहरूको विकास र रखरखावलाई प्रभाव पार्छ। यसको अतिरिक्त, यसले गर्न सक्दछ:
प्रोटीनको एनालिटलवाद बढाउनुहोस्
अमीनो एसिड को साइबोलोलिज्म घटाउनुहोस्
पोटेशियम, फास्फोरस, र नाइट्रोजनको मूल्यव्यापी रासायनिक संतुलनको प्रतिधारणलाई सुधार गर्नुहोस्
एस्ट्रोजेन रिसेप्टरहरूलाई प्रतिबन्धित गर्नुहोस् र / वा रोक्नुहोस्
एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरूलाई रोकथाम गर्न फ्लूक्सिमेस्टोनको क्षमता भनेको मुख्य कारण यो महिला स्तन क्यान्सरहरूको उपचारमा प्रयोग गरिएको थियो।
पीटीटी ड्रग्स अस्ट्रुrozोल
Anastrozole एक प्रकार2गैर-स्टेरॉयड प्रतिस्पर्धात्मक aromatase अवरोधक (दोस्रो पीढी) हो जुन aromatase एंजाइम (क्रोमोजोम P450) को रोकथाम गरेर कार्य गर्दछ, एस्ट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन को रूपांतरण को लागि जिम्मेदार कुंजी एंजाइम .. यो टेस्टोस्टेरोन, निचो एस्ट्रोजन को बढन सक्छ (तर नहीं धेरै धेरै), र स्वस्थ जोडीहरू र लिपिड राख्नुहोस्।
एरमिडेक्स प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादनलाई उत्तेजित गरेर काम गर्दछ जुन विचार र कारण तपाईले पीसीटी योजना गर्नुहुन्छ र यसले धेरै ठूलो डिग्रीसम्म गर्नेछ। यद्यपि यसको प्रकृति जस्तै यसले शरीरमा इस्ट्रोजेनको मात्रालाई गम्भीर रूपमा कम गर्दछ र पीसीटी अवधिमा तपाईको लक्ष्य प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन पुनः सुरु मात्र होइन तर हाम्रो शरीरलाई हर्मोन उत्पादनको सामान्य स्तरमा फर्कन सक्षम पार्दैछ। एस्ट्रोजेनलाई प्राय जसो शत्रुको रूपमा लिइन्छ तर वास्तवमा यो शरीरको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हार्मोन हो, विशेष गरी जब हामी यसको उचित महत्त्वलाई राम्ररी काम गरिरहने प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणालीमा ध्यान दिन्छौं। यस कारणका लागि, PER योजनाको क्रममा प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न SERMs उत्तम विकल्प हो; नोलभाडेक्स र क्लोमिड जस्ता सर्महरू सँधै राम्रो विकल्प हुन्छन्। मूल्यको रूपमा यो पहिलो तीन औषधिहरू भन्दा धेरै छ जुन हामीले पासिंगको शुरुवातमा शुरू गरेका थियौं। यद्यपि यसमा कुनै शंका छैन कि एरमेडेक्स शक्तिशाली छ किनकि यसले एक्सएनयूएमएक्समा ब्लक गर्दछ। एस्ट्रोजेनको% चोटी सांद्रता भित्र, लेट्रो नजिक तर धेरै कडा होईन।
PCT Letrozole कच्चा पाउडर - पाँच चीजहरु मलाई थाहा हुनु पर्छ !!!	Oxandrolone पाउडर को लागि प्रयोग गरिन्छ?